ပြန်တူးမိခြင်းများ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြန်တူးမိခြင်းများ…
- Kaung Kin Pyar
Posted by Kaung Kin Pyar on Jan 7, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 10 comments
သများရဲ့ အတိတ်ကအရိပ်တွေကို လက်ဖက်ရည်ပိုစ့်တစ်ခု ဖဘမယ်တင်ပြီး ဆွတယ်…။ :byee:
လမ်းမီးတိုင်မလင်းတလင်းအောက်မှာ သစ်သားခုံပုလေးတွေနဲ့ ထိုင်ပြီး လက်ဖက်ရည်သောက်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးမြို့ညတွေကို အတော်လွမ်းသွားပြီ..။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရယ်လို့ စ သိတာ အမချော နှစ်ယောက်က စ ပါတယ်.. (၀မ်းကွဲတွေပါ..)။ သူရို့ နှစ်ယောက်က အတော်လေး ချောကြလှကြတယ်..
ကိုယ့်အမတွေမို့ ကိုယ်ညွှန်းတာမဟုတ်..၊ တော်ရုံမ်ိန်းမလောက် ကျမ လှတယ်ကို မထင်တာ…။
ဒီအမ နှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ယောက်က အရပ်ရှည်ပြီး ညိုချောချောတာ.. (မော်ဒယ်တောင် လုပ်ခဲ့သေးတယ်..)
သူ ကျူရှင်ကအပြန် စာအုပ်လေးလက်မှာပိုက်ပြီး ကြောင်လျှောက်ဒီဇိုင်းနဲ့ လျှောက်တဲ့ပုံစံ ခုချိန်ထိ ကျမ မတတ်ခဲ့…။
တစ်ယောက်ကတော့ အသားဖြူဖွေးနေပြီး.. ခန္ဓာကိုယ် လှတာ… LikeaSagaing Pot အဟွတ်!
အဲ့ဒီခေတ် အကိုကာလသားများ ဘောလုံးကွင်း ချိန်းချခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံနှစ်ေယာက်ရယ်…
ဒီအမ နှစ်ယောက်ရဲ့ အပြင်ထွက်ရန် အလှပြင်ခြင်းအချက်ရယ်၊ တခါတရံ တောက်ညင်ကတ်လောက်အောင် ပဲကျွေးခြင်းအချက်တွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ရယ် အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းကြပါတယ်….။ ကျမကလဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက ယောကျာင်္းလေးချောချောတွေထက် မိန်းမလှတွေများ မြင်ရင် ဇက်ကြီးလည်အောင် လှည့်ငေးခဲ့ဖူးတာ…။ ခုလဲ ကျမ ဖုန်းထဲမှာဆို.. မိန်းမလှတွေပုံချည်း… အဟီးးးးး
ဖဘမယ် စချင်နောက်ချင်လို့ သူငယ်ချောပုံတွေများ အရေးပေါ်လိုချင်ရင်တောင် ဖုန်းထဲအဆင်သင့်မရှိလို့ သူရို့ နာမည်နဲ့ ဂူဂဲယ်ကြီးဆီက သွားဝိုက်ရတယ်….။ အဲ..မိန်းခလေးတွေများ လှတဲ့ပုံဆိုရင်တော့ ထိုင်းက ဖြတ်ဖောက်ချုပ်တွေတောင် ချစ်လို့ သိမ်းထားတာရယ်…
ဒါမိုးအဖြစ်ကို နားလည်ပေးမယ့်အမတွေ ရွာထဲမယ်ရှိတယ်…
၁ မမချွိ… (အဟီး… )
(အဟဲ.. Snake Snake See the Leg ပြီး ထင်သလောက်ကို ဆွဲစိထားတာ..မဟုတ်ဖူးဆိုရင် ဆောဒီးပါ.. )
သူရို့နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ဘာလို့မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ဆို.. သူရို့နဲ့များ အပြင်မထွက်လိုက်နဲ့ သူရို့ မျက်နှာထားနဲ့ ခြေလှမ်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ရောက်ရင် အလိုလိုဒီဇိုင်းပြောင်းတာ..
ခပ်ချဉ်ချဉ် ပြောရရင် ပဲဟဲဟဲ ပေါ့လေ…
အဲ့ခေတ် အကိုကာလသားတွေက ဒီဘက်တွေလို နှာခေါင်းက ဦးဆောင်တာတွေမဟုတ်သေး၊ ငမ်းချင်ရင်တောင် တစ်ဖက်မိန်းခလေး အနေမခက်တောင် ညှာညှာတာတာလေး ငမ်းကြရှာပါတယ်…။ ဒါပေသိ.. ပုံမှန်သွားနေရင်း ခြေလှမ်းမြန်သွားတာ..၊ မျက်နှာချီထားသလိုနဲ့ ဆိုင်ထဲ ဘယ်သူဘယ်ထောင့်ထိုင်နေမှန်း သိနေကြတဲ့… မျက်လုံးဘေးရောက်ပညာသည်တွေနဲ့ အတူသွားလာစားသောက်လေတော့ သြော်.. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ရောက်ရင် မိန်းမအများ တတ်သိထားရမယ့် ပညာတွေလို့ ငယ်စဉ်အခါက တလွဲမှတ်ခဲ့တာ… (အပေါင်းအသင်းမှားခဲ့တာကြောင့်ပါ.. )
၁၀တန်းပြီးနှစ် ရောက်တော့ ကလေးမြို့မှာ….
အဖေနဲ့ ညဘက်ဆို ဆိုင်ကယ်တစ်ယောက်တစ်စီးစီ စီးပြီး မြို့လယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နား လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ် ခုံပုလေးတွေခင်းထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားသွားထိုင်ဖြစ်ခဲ့တာ…။ ရာသီအေးအေးမှာ..ဆိုင်ကယ်လေတိုးဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် အ၀တ်ထူထူတွေဝတ်ထားရင်း..၊ အေးနေတဲ့လက်တွေကို လက်ဖက်ရည်ခွက်ပူပူလေးကိုင်ပြီး နွေးအောင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အရသာ.. အခုပြန်ရှာချင်ရင်တောင် မရနိုင်တော့ပါ…
အဲ့ဒီခေတ်က သီချင်းခွေတစ်ခွေ ပေါက်တယ်မပေါက်တယ်ဆိုတာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၃ဆိုင်လောက်ထိုင်ရင်ကို စနည်းနာလို့ရနေတဲ့ခေတ်ရယ်…
ဆိုင်က ဖွင့်ထားတဲ့ ကြားဖူးနားဝ သီချင်းသံခပ်တိုးတိုးကို လက်ကစည်းချက်လိုက်ရင်း ပါးစပ်က လက်ဖက်ရည်ရဲ့ အရသာကို ခံစားရင်း.. ဦးနှောက်က တွေးချင်ရာတွေးနေရင်း.. မျက်လုံးက ငေးချင်ရာငေးကြည့်ရင်း…
အဲ့ဒီလို အပန်းဖြေလိုက်ရတဲ့အရသာဟာ ခုချိန်လို အားရင် ဖဘပြေးပွတ်လိုက်တာ… အခွေတွေ သဲကြီးမဲကြီး ထိုင်ကြည့်ပလိုက်တာ…ဂိမ်းဆော့လိုက်တာ.. အဲ့ဒီအားလပ်ချိန် အပန်းဖြေနည်းတွေထက် အရသာ အပုံကြီးကွာတယ်…
နှစ်တွေ သိပ်မကြာပေမယ့်.. ခေတ်တွေပြောင်းတာတော့ သိပ်မြန်လွန်းတယ်လို့ထင်မိ…
တိုးတက်လာကြတာနဲ့အမျှ…ပွင့်လင်းမြင်သာလာတာနဲ့အမျှ ဆုံးရှုံး လက်လွှတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ တချို့အရာတွေကို ခုလို တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ကြုံလာတိုင်း ပြန်လိုချင်မိ… အရမ်းနှမြောမိတာပဲ…
About Kaung Kin Pyar
Kaung Kin Pyar has written 49 post in this Website..
View all posts by Kaung Kin Pyar →
ချစ်ခင်တဲ့ နေရာမှာ ကျားမ မခွဲခြားပေမဲ့လည်း အရင်က မိန်းမလှလေးတွေကိုပိုချစ်တတ် ငန်းတတ် ပေါင်းတတ် သင်းတတ်။
အာ့ကြောင့်လည်း အထင်ခံရတာ နည်းသေးး
ကောင်းကင်ပြာလည်း မိန်းခေးချင်း ချစ်တတ်တယ်လို့ သိသာတယ်။
အဲ။ မိန်းခေးရန်သူလည်း များလိမ့်မယ်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အကြောင်း ဆက်ပြောရရင် အရင်က နယ်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဆိုတာ တစ်ဘလော့စာ ကို တစ်ဆိုင်လောက်ရှိတယ်။
နားထောင်ချင်တဲ့ အခွေယူသွားပြီး ဖွင့်ခိုင်းကြတော့ သီချင်းပေါင်းစုံ ကြားရတယ်။
အခုတော့ ရပ်ကွက်ထဲမယ် ဘီယာဆိုင်တွေချည်းပဲ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုလို့ ဆိုင်ကြီးကြီးတွေပဲ မတ်မတ်ရပ်နိုင်တော့တယ်။
ဆိုင်တွေနဲ့ အတူ ငယ်ဘဝ ခံစားချက်လေးတွေပါ ပျောက်သွားတယ်။
မမဂျီးပြောမှ မိန်းခေးရန်သူလဲ များခဲ့ဖူးလိမ့်မယ်ထင့်…။ ငယ်ငယ်က ကိုယ့်ကိုချစ်တာနဲ့ မုန်းတာ.. ၂မျိုးပဲ ကြုံခဲ့တာရယ်…အလယ်အလတ်ရယ်လို့ မရှိခဲ့ဖူး…
ချစ်ရင်လဲ ကိုယ်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးချစ်နေပြီး.. မုန်းတဲ့သူတွေကျတော့လဲ ကိုယ်ဘယ်လိုနေနေ ဆညင်ကတ်ကုန်ကြတာပဲ….။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆို နင်ပီယဆေးနဲ့ ယက္ခဆေး တစ်လှည့်ဆီများ စားနေသလားလို့တောင် မေးခဲ့ဖူးသေးတယ်….။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှုတော့ ဒီမယ် မရှိနေတော့….
တခါတလေ.. ရန်ကုန်မြို့ကြီးကနေ နယ်ပြန်ပြေးချင်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုအရသာတွေ ပြန်လိုချင်လာလို့ရယ်…။
.ပီယဆေးနဲ့ ယက္ခဆေး – ဒီစာလုံးမှတ်ထားဦးမှ။ အဲဒါ မသိဘူး။ နောက်လိုအပ်ရင် ဘာသာပြန်စာအုပ်ထဲ ထည့်သုံးမယ်နော် အဟီး။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေတော့ရှိသေးပေမဲ့သီချင်းမဖွင့်တော့ဘူး…တီဗွီနဲ့စကိုင်းနက်ကလာတာတွေပြနေတော့တာ…လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတူထိုင်ကြပြန်တော့ လည်းအသီးသီးက ဖုန်းပွတ်ကြပြန်ရော…စကားပြောတာနည်းကုန်တယ်…
ခေတ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ.. တိုးတက်လာသလို ဆုတ်ယုတ်လာတာတွေလဲ တပုံချည်းရယ်..
ကကပ သာ— ဟိုအစ်မကြီးလို ကြောင်လျှောက် လျှောက်တာမြင်သွားရင်
ကကပကို ကျားချောင်း ချောင်းပြီး ဆင်ကြံ ကြံနေတဲ့ တို့ဦးကြောင်တစ်ယောက်
ကကပနောက် မြင်းလိုကဆုန်ပေါက်ပြေးလိုက်ပြီး ကြွက်ခုတ်သလို ခုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။
(တင်စားချက်တွေအတွက် ဦးကြောင်ရေ—ဂဒေါ့နော့။ နောက်ထာ)
ကံကောင်းစွာနဲ့—လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွေကိုတော့ ကျုပ်တို့ မစွန့်လွှတ်ရသေးဘူး
အဟေးး ဟေးးးး နာက ကြောင်လျှောက်ထက် ဆင်မယဉ်သာအဖြစ်နဲ့ကတောင် ပိုနီးစပ်အူးမယ်….
လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းနဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေများ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ မြင်မိရင် နာ့ညွှန်းဘာအူးအေ…
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says:
ဘီယာဆိုင်တွေပေါပြီး ဘီအီးဆိုင်တွေ ရှားသွားလို့ ရင်ထဲ
ဒါကတော့ အူးလေးမြောက်ပိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်လို့ ဒီအပိုင်းကို တင်စက်ဖို့ကတော့ အူးလေးမြောက်တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းပါ
ကင်းကောင်ဘီလူးနဲ့ ဟိုးအနပ်စုန်းတူးပီး အဝှီဈိထိ ခြစ်ပွဲဝံချဉ်သယ်..